टेलिकमको उल्टो यात्राः तामाको तार मोह, एडीएसएलमै लगानी थप्दै – PuraKhabar
टेलिकमको उल्टो यात्राः तामाको तार मोह, एडीएसएलमै लगानी थप्दै
February 11, 2018 Devika
२८ माघ, काठमाडौं । सरकारको ब्रोडब्यान्ड नीतिको पहिलो लक्ष्य छ, ‘शहरी क्षेत्रमा माग भएमा १० एमबीपीएस गतिको ब्रोडब्यान्ड सेवाको उपलब्धता विस्तार गर्ने ।’ तर, सरकारी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमको गति यो नीतिको ठ्याक्कै उल्टो छ ।
नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणको भनाइमा टेलिकम अझै पनि तामाको तार प्रविधिमा आधारित एसिमेटि्रक डिजिटल सब्स्क्राइबर लाइन (एडीएसएल) सेवामै ‘अस्वाभाविक मोह’ देखाइरहेको छ । टेलिकमको एडीएसएल प्रविधिमा एक एमबीपीएसको इन्टरनेटले पनि राम्रो ‘पर्फम’ गरिरहेको छैन । त्यसलाई अधिकतम पाँच एमबीपीएससम्म पुर्‍याउन टेलिकमले पुराना तामाको तार फेर्नेलगायत काम तीव्र बनाएको छ ।
सुस्त भएको र पटक-पटक समस्या आइरहने कारणले एडीएसएललाई उपभोक्ताले रुचाएका छैनन् । टेलिकमको एडीएसएल प्रविधि व्यापक आलोचित हुँदा इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)हरु आक्रामक रुपमा फाइबर सेवा विस्तार गर्दैछन् । टेलिकम पुरानै गतिमा तामाको तार च्यापेर हिँडिरहेको छ ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले टेलिकमको वाषिर्कोत्सवमा कटाक्ष गरेका थिए, ‘टेलिकमले लगातार बजार हिस्सा गुमाउँदैछ । हामी नियामकहरु ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको कुरा गरिरहेका छौं । टेलिकम एडीएसएलप्रति अगाध मोह देखाउँदैछ । र, यो अनौठो छ ।’ तामाको तारमा आधारित एडीएसएल सेवा विश्वभरबाटै विस्थापनको क्रममा छ । यसको विकल्पमा छाइरहेको छ, ‘फाइबर टु दी होम’ (एफटीटीएच) । तर, सिलिका ग्लासयुक्त फाइबरको विस्तारमा सुस्त छ, टेलिकम ।
बरु, एडीएसएलको सुधारमा खर्च थपिरहेको छ टेलिकम, जसलाई प्राधिकरण अध्यक्ष झाले सार्वजनिक रुपमै ‘टेलिकमको उल्टो गति’ भनेका छन् । टेलिकम एडीएसएललाई नै कायम राख्न चाहन्छ । र, पुरानै प्रविधिमोह निरन्तर प्रकट गरिरहेको छ । प्राधिकरण भने यो प्रविधिलाई परम्परागत मान्छ । र, टेलिकमको यो लगानीलाई ‘बालुवामा पानी’ को संज्ञा दिन्छ ।
तामाको तारबाट प्रवाह हुने ब्यान्डविथले अबको ब्रोडब्यान्डको मर्मलाई बोक्न नसक्ने प्राधिकरणको तर्क छ । इन्टरनेट सेवा चुस्त गरेर नागरिकको दैनिकी अझ सरल बनाउने नीति छ, सरकारको । त्यसैले टेलिकमलाई आधुनिक प्रविधिको अप्टिकल फाइबरको विस्तारमा आक्रामक हुन प्राधिकरणले सुझाउँदै आएको छ ।प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल पनि एडीएसएलप्रति टेलिकमको विश्वासलाई ‘श्रृष्टीप्रतिको मोह’ बताउँछन् ।
टेलिकमले शुरुबाटै तामाको तारमार्फत् टेलिफोन सेवा दिइरहेको छ । त्यही तारबाट इन्टरनेट सेवा पनि उपभोक्तासम्म पुगिरहेको छ । आफैंले श्रृष्टी गरेको एडीएसएललाई अहिल्यै ‘फेजआउट’ गर्न तयार देखिँदैन, टेलिकम । जबकि, द्रुत गतिको वाइम्याक्स विस्थापित गर्ने योजना टेलिकमले बनाइसकेको छ । तथापि, सरकारी टेलिफोन सेवा प्रदायकले एडीएसएलका ग्राहक पनि गुमाउन चाहेको देखिँदैन । र, एडीएसएलका प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी पनि छैनन् ।
टेलिकमले लगातार बजार हिस्सा गुमाउँदैछ र एडीएसएलप्रति अगाध मोह देखाउँदैछ, जुन अनौठो छ प्राधिकरणले भने फाइबर विस्तार गरेर एडीएसएलको विकल्प ग्राहकलाई दिन टेलिकमलाई दबाब दिइरहेको छ । सेवामा चुस्तता नआए अब टेलिकमलाई निजी सेवा प्रदायकले उछिन्ने प्राधिकरणको आकलन छ । टेलिकमका तार धेरै पुराना भइसकेका छन्, जसले सेवा प्रवाहमा बारम्बार समस्या निम्त्याउँछन् । दूरसञ्चारमा आधारित प्राविधिक पक्षहरुलाई हेर्ने हो भने पनि तामाको तार अप्टिकल फाइबरको तुलनामा निकै कमजोर मानिन्छ ।
के हो एडीएसएल प्रविधि ?
तामाको तारमा आधारित हुने भएकाले सामान्य वातावरणीय परिवर्तनले पनि एडीएसएलको गुणस्तरमा असर पार्छ । यसमा द्रुत गतिमा डाटा ट्रान्सफर हुँदैन । त्यसैले उच्च गति र आकारको भिडियो यसमा चल्न सक्दैन । तामाको तारमा गति र ब्यान्डविथको सीमितता हुन्छ । यसमा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सिग्नलका रुपमा डाटा प्रवाह हुन्छ । एडीएसएलमा एक पटकमा तीन हजार कल रिसिभ गर्न सकिन्छ । यसमा हाई फ्रिक्वेन्सीमा डाटा पठाउन खोजियो भने अवरोध आइहाल्छ । डाटा प्रवाहलाई प्रकाश वा अन्य म्याग्नेटिक वेबमार्फत् प्रभावित गर्न सकिन्छ ।
जमिनमुनि बिछ्याइएको तामाको तारलाई माथिल्लो सतहमा हुने चापले पनि ‘ड्यामेज’ गर्ने जोखिम उच्च रहन्छ । सुरक्षाका हिसाबबाट पनि एडीएसएल कमजोर प्रविधि मानिन्छ । तार काटेर रिसिभर लगाई जोसुकैले पनि डाटा रिसिभ र ट्रयाक गर्न सक्छ । रिसिभरमार्फत् नम्बर लगाएर कल गर्न सकिन्छ । एडीएसएल प्रविधि एफटीटीएचभन्दा महँगो पनि मानिन्छ । तर, यसको प्रणालीमा जोडिने उपकरण भने एफटीटीएचभन्दा सस्ता हुन्छन् ।
मोक्षधाममा शिवरात्री महामहोत्सव हुने
राष्ट्रिय फुटबल टिमका उपकप्तान लामाको शल्यक्रिया, ६ महिना मैदान नफर्कने
June 14, 2018 पुराखबर 0
तपाईले चलाएको कम्प्युटरको माउस र किवोर्डको समेत रेकर्ड राख्छ फेसवुकले : मार्क जुकरबर्ग !
क्याम्ब्रिज एनालाइटिका डेटा लीक भएपछि फेसबूक पनि विवादमा तानिएपछि मार्क जुकरबर्गले अमेरिकी संसद्को माथिल्लो सदनमा स्पष्टीकरण...
June 13, 2018 पुराखबर 0
एक सातासम्म अफर: मोबाइल किन्दा टिभि सित्तैंमा !
फुटबलको कुम्भ मेला विश्वकप फुटबलको अवसर पारेर मोबाइल एप रिचार्जरले मोबाइल किन्दा टिभि सित्तैमा दिने अफर...
ब्याट्रीको समस्या झेल्दै आएका ग्राहकले आफ्नो आइफोन साट्न पाउने
एप्पलको आधिकारिक बितरक जेनरेशन नेक्स्ट कम्यूनिकेसनले आइफोनमा ब्याट्रीको समस्या भोगिरहेका ग्राहकलाई सटही सुविधा दिने भएको छ।...